CEEBEEY TACAAL: Weerarka Real Madrid oo dhan waxaa ka Goolal badan 31-jirka Barcelona – Gool FM
CEEBEEY TACAAL: Weerarka Real Madrid oo dhan waxaa ka Goolal badan 31-jirka Barcelona
(Madrid) 04 Nof 2018. Luis Suarez ayaa caddeeyay inuu weli garanayo sida kubbada loo dhex dhigo shabaqa, wuxuuna durba leeyahay 9-gool horyaalka La Liga taa oo ka dhigan inuu ka goolal badan yahay dhammaan weerarka Real Madrid marka la isku geeyo goolashooda.
31-jirka ayaa la kulmayay dhaleeceyn xoogan oo ah inay ka dhammaatay balse wuxuu taa uga jawaabay saddexleydii uu ka xareeyay Real Madrid kulankii El Clasico iyo labadii gool uu xalay ka dhaliyay Rayo Vallecano.
Waa gool dhaliyaha ugu sarreeya Barcelona horyaalka waqti xaadirkaan oo wuxuu dhaafay Messi.
Suarez, Cristhian Stuani iyo Iago Aspas, oo leh min 9-gool ayaa hogaaminaya gool dhalinta La Liga ee kal ciyaareedkan.
Weerarka Real Madrid ee Bale, Benzema iyo Asensio ayaa dhaliyay 8-gool marka la isku geeyo goolashooda taa oo ka dhigan inuu ka goolal badan yahay Suarez oo qura.
Xiddiga reer Wales ayaa dhaliyay afar gool, Benzema saddex halka Asensio uu dhaliyay gool madi ah horyaalka La Liga.
Jordi Alba oo fariin cad u diray macalinka xulka qaranka Spain Luis Enrique
Thibaut Courtois oo daaha ka qaaday xaqiiqada ku aadan in Roberto Martinez uu noqonayo badalka Lopetegui ee Real Madrid